घाटी खसखस गरेर अलि अलि दुखेजस्तो भएको छ – ज्यान समेत जानसक्छ – Hamrosandesh.com
घाटी खसखस गरेर अलि अलि दुखेजस्तो भएको छ – ज्यान समेत जानसक्छ
घाँटीमा व्याक्टेरियाको सङ्क्रमणबाट टन्सिल हुने गर्छ । टन्सिललाई हामीले सामान्य रुपमा लिएर खासै उपचार गर्दैनौँ । त्यही हेलचेक्रयाइँ नै पछि मुटु जस्तो संवेदनशील अङ्गमा जटिल प्रकारको रोग लाग्न सक्छ । यस्तो समस्याले धेरै मानिसको अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको चिकित्सकले बताएका छन् ।मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मी झण्डै ९९ प्रतिशत मानिसलाई यस कुराबारे थाहा नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । डा. रेग्मी एक सय रुपैयाँमा उपचार हुने टन्सिलको सही उपचार नगर्दा तीनलाखसम्म खर्च लाग्ने मुटुरोगको जटिल समस्याबाट प्रभावित हुने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्रायः यस्तो समस्या पाँचदेखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकामा हुने गर्दछ ।